Grand Royal Group International (GRGI) - Uncategorized - Grand Royal Group International (GRGI) - Page2Uncategorized - Grand Royal Group International (GRGI) - Page 2
Grand Royal Group International ကုမ္ပဏီ အစုအဖွဲ့က ကျပ်သိန်း (၂,၀၀၀) အား ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် လှူဒါန်းကြောင်းကြေညာ၍ “STOP COVID-19 YELLOW CAMPAIGN”လှုပ်ရှားမှုတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်
Grand Royal Group International (GRGI) သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်၊ နာမည်ကျော် ဝီစကီ အမှတ်တံဆိပ်များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်၊ ကုမ္ပဏီ တည် ထောင်ခြင်း (၂၅) နှစ်ပြည့်၊ ငွေရတုနှစ်ပတ်လည်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း (၂၅) နှစ်ကြာ၊ အ တွေ့အကြုံများကြောင့်၊ မြန်မာပြည်တွင်းယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းကို အ များအသိအမှတ်ပြုထားခြင်းလည်းခံရသည်။ နိုင်ငံတွင်းမှာဆုတံဆိပ်များသာမက၊ အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာက အသိအမှတ်ပြုသော၊ ထိတ်တန်း ဝီစကီအမှတ်တံဆိပ်များတွင်၊ အကောင်းဆုံး ဝီစကီ (၂၀) အတွင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
Grand Royal Group International (GRGI) ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း (၂၅) နှစ်မြောက်၊ ငွေရတုအထိမ်းအမှတ်၊ အနေနှင့်၊ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း (၂,၀၀၀) တိတိကို၊ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရရှိရေး ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ သို့ UMFCCI အသင်းကြီးမှတဆင့်လှူဒါန်းထားပြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ ဦးဆောင်သည့် “STOP COVID-19 Yellow Campaign” လှုပ်ရှား မှုတွင် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်စွာပူးပေါင်းပါဝင်လိုက်သည်။ “ကျွန်တော်တို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး လှူ ဒါန်းတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေဟာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတစ်ချင်းစီက ၊ အားတက်သရောလှူဒါန်းထားတဲ့ အလှူဒါန ဖြစ်ပြီး၊ စုစုပေါင်းပမာဏပေါ်မှာမှ ကုမ္ပဏီဖက်က ထပ်မံအားဖြည့်လှူဒါန်းထားတဲ့ အလှူပမာဏဖြစ် ပါတယ်။ ဒီစုပေါင်းအလှူဒါနအတွက်၊ ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရော၊ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းအတွက်ပါ အ ထူးဝမ်း‌မြောက်ဂုဏ်ယူရပါတယ်။” ဟုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရန်ပုံငွေလှူဒါန်းရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ GRGI ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Rahul Colaco ကပြောကြားသည်။
GRGI ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဌ၊ ဦးအောင်မိုးကျော်က၊ “အခုလို၊ ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ရေး ၊တစ်ဦး ကိုတစ်ဦး သတိပေးရေး၊ အဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရော၊ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ (၂၅) မြောက်၊ ငွေရတု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူဖို့အလှူဒါနကို တင်ပြခွင့် ရတဲ့အတွက်၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း‌‌‌ဒေသကြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နှင့် ရန်ကုန် တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ‌ဒေါက်တာ ဦးထွန်းမြင့်နဲ့ တာဝန်ရှိ သူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ STOP COVID-19 Yellow Campaign၊ ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ရေး၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးသတိပေးရေး၊ အဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုဟာ၊ ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံ တော်ရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွင်းက စီးပွား‌ရေးတွေ အနေနဲ့၊ တထောင့်တနေရာကနေပြီး၊ New Normalနဲ့ အတူတူ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ အင်မတန်အထောက် အကူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့်၊ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက်ဆုံးရှုံးသူ အပေါင်း (၃,၀၀၀) ခန့် နဲ့ ရောဂါကူးဆက်ခံရသူဦးရေ (၁၃၅,၀၀၀) ခန့်ရှိနေလို့၊ မဖေါ်ပြနိုင်လောက် အောင်စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာနဲ့ယှဥ်ကြည့်ရင်တော့၊ ကမ္ဘာနဲ့အဝန်း အသက်ဆုံးရှုံးသူ ပေါင်း (၂) သန်းကျော်နဲ့ ၊ ရောဂါကူးစက်ခံရသူဦးရေ သန်း (၉၀) ကျော်ရှိလို့၊ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ အချိန်မီကြိုးပမ်းကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ထားကြတယ်ဆိုတာ အင်မတန် ထင်ရှားပါတယ်။သို့ပါသော်လည်း၊ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ စီးပွားရေးအခက်အခဲများစွာနဲ့ ရင် ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပြီး၊ လူသန်းပေါင်းများစွာကို အကျိုးသက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာနာ ထောက်ထားသောအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်တို့တတ်အားသ၍ လှူဒါန်းတာတွေဟာလည်း၊ ဒီ ရောဂါပိုးကို တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် အများပြည်သူကို အထောက်အကူပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” ဟုဆိုသည်။
တဖန်၊“GRGI ဟာ၊ လူမှုအသိုင်းအဝန်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို အမြဲရှေ့တန်းတင်ထား ပါ တယ်။ ဒီကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း၊ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပြီး၊ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ၊ စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေး ကောင်းကျိုးတွေ အ တွက်၊နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ဆောက်ထားပြီးသားတွေဟာလည်း အင်မတန် များပြားပြီးဖြစ်ပေမယ့်၊ လက်တွဲပူးပေါင်းမှုတွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေကို ယခင်ကထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်း ရည်ရွယ်ထား ပါတယ်။” ဟု အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်သူ Mr. Colaco ကိုထပ်‌လောင်း ပြောကြားသည်။
GRGI အနေနဲ့ တနှစ်ပတ်လုံးမှာ အလှူဒါနများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ အများပြည်သူနဲ့ တသား တည်းရှိနေသည့် အတွက်ဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည်။ ကပ်ရောဂါ၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခံရသော လူမှု အသိုင်းအဝန်းများကို ရည်ရွယ်၍ လှူဒါန်းမှုများ ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အတွက်လည်း ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ အတွက်၊ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းသည်လည်း၊ ဆက်စပ်လျက်ရှိသော၊ စီးပွားဖက်များ၊ စားသုံးသူများ၊ စီးပွားရေး ကဏ္ဍအတွင်းမှ လူမှုအသိုင်းအဝန်းများ၏ အားဖြည့်မှုများကြောင့်ဟု ယုံကြည်သည်။ စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး ဂေဟစနစ်သည်၊ တစ်ခုစီသီးခြားရပ်တည်၍ မရနိုင်ပေ၊ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီများ၏ ဆောင် ရွက်ချက်များသည်၊ အမျိုးမျိုးသောလူမှုအသိုင်းအဝန်းများကို အကျိုးသက် ရောက်မှုများရှိ သည်ဟု ကုမ္ပဏီ ကယုံကြည်သည်။ သို့ပါ၍၊ GRGI ၏ လူမှုအသိုင်းအဝန်းများ၊ စားသုံးသူများ နှင့် ပါဝင် ပတ်သက်နေသူများ အားလုံးနှင့် ဆောင်ရွက်သော၊ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ အားလုံးသည်၊ “နိုင်ငံ့သား ကောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း” အဖြစ်ရပ်တည်ရေးကို အစဥ်းအမြဲဦးတည်လျက်ရှိသည်။
ယခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းတွင်၊ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနများ ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဝေဒနာ၊ အပြင်းအထန်ခံစားရသူ လူနာအယောက် (၁၀၀) အား ကုသရန် ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သော COVIFOR ရမ်ဒီစီဗာ ထိုးဆေးအလုံးရည်ပေါင်း (၆၀၀) ကိုလည်း ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနသို့သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနများ၏လမ်းညွှန်မှုအားခံယူလျက်၊ ပထမ လှိုင်း စတင်ကတည်းကပင်၊ လူထုအထောက်အပံ့အဖြစ်၊ မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း (၅) ထောင်တန်ဖိုးရှိ သော၊ နိုင်ငံ့သားကောင်းလက်သန့်ဆေးရည်ဗူးပေါင်း (၂၀၀,၀၀၀) ကို နိုင်ငံတဝန်းရှိ၊ ဆေးရုံများ၊ ကွာရန်တင်းစင်တာများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ပရဟိတအဖွဲ့ အစည်းများ ကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ယင်းလှူဒါန်းမှုအစုစုသည်၊ တတ်အားသ၍ လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်သဖြင့်၊ ပမာဏအားဖြင့် များပြား သည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း၊ မိမိတို့ အများပြည်သူလိုအပ်နေသော အချိန်တွင်၊ ပံ့ပိုးရန်အတွက် အသင့်ရှိ ကြောင်းကတိကဝတ်ကို သက်သေထူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ GRGI နှင့် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများ အားလုံးသည်၊ ယခုကဲ့သို့ အထူးလိုအပ်သောအချိန်များတွင်၊ တစ်ဦးကိုယ်တစ်ဦး အမြဲကူညီရန် ယုံ ကြည်လျက် မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအဝန်း၏ တစိတ်တဒေသအဖြစ် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီအနေနှင့်ပြည်တွင်း၌ ရှိသော လူမှုအသိုင်းအဝန်းတွင်မကပဲ, ပြည်ပထိုင်းနိုင်ငံတွင်၊ ‌ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော၊ မြန်မာပြည်သူအများ၊ COVID-19 ကာကွယ်‌နိုင်ရေးတွင်၊ အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်၍၊ GRGI ၏ ဒါရိုက်တာနှင့် အဓိက၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ့သူ၊ အစုရှယ်ဝင် အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာကုမ္ပဏ ဖြစ်သည့် Thai Beverage Public Company Limited မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ Mr Polapatr Suvarnazorn ကဦးဆောင်ပြီး၊ COVID-19 တစ်ကိုယ်ရေ သုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့်၊ နှာခေါင်းစည်းအရေအတွက်စုစုပေါင်း (၂၀,၀၀၀) ခု၊ အ ရက်ပျံ ပမာဏ (၇၂) ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သော၊ အရက်ပျံ (၁၀၀) လီတာ နှင့် လက်သန့်ဆေးရည်ဂျဲလ်ဘူး (၂၀) ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ၊ ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံး၌၊ အသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သိန်း ထံသို့၊ ယခုလ (၁၅) ရက်နေ့ကပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ယင်းသည်၊ မြန်မာလူထုကို ခက်ခဲသော အချိန်များတွင်၊ လက်တွဲဖော်အဖြစ် အတူရှိနေမည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိကဝတ်ကို သက်သေထူလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၁။GRGI ကုမ္ပဏီ အစုအဖွဲ့အကြောင်း
၂။ တွဲဖက်ဥက္ကဌ၊ ဦးအောင်မိုးကျော်၏ ဓါတ်ပုံ
၃။ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ Rahul Colaco ၏ ဓါတ်ပုံ
၅။ ThaiBev ၏ လှူဒါန်းခြင်း
၆။ ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ရရှိထားသော ဆုများ
Grand Royal Group International donates 200 Million MMK to purchase COVID-19 vaccines and participates in “STOP COVID-19 Yellow Campaign”
Tax Appreciation for 2018-2019 Assessment Year
The Government of the Republic of the Union of Myanmar honoured the top taxpayers of the country for 2018-2019 tax year on 10 Aug 2020. The president, His Excellency U Win Myint attended the ceremony held at the Presidential Palace in Naypyidaw and presented awards to the outstanding taxpayers for income tax, commercial tax, and specific goods tax.
U Aung Moe Kyaw (Co-Chairman of Grand Royal Group International Co.,Ltd) and Daw Mya Pwint Phyu (Alternate Director of Grand Royal Group International Co., Ltd) accepted honorable certificates at the ceremony.
Grand Royal Group International Co., Ltd was honored by the president as follow;
1. No3in Specific Goods Taxpayer
2. No6in Commercial Taxpayer
3. No3in Commercial Taxpayer
4. No5in Income Taxpayer.
Grand Royal Group International Co.,Ltd is very proud to be recognized every Assessment Year as No 1 to5the highest top taxpayer in Myanmar and asaresponsible group of companies in line with our corporate motto ‘Being A Good Corporate Citizen’.
Grand Royal Group International Co., Ltd မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအခွန်ထမ်းကြီး(၅) ဦးအနက် တစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်း
Grand Royal Group International Co., Ltd အနေဖြင့် ယမကာဈေးကွက်အတွင်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်ရပ်တည်လာခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် (၂) ခုကျော် အထိခိုင်မာစွာတည်ရှိနေပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ယုံကြည်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်ခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချမှတ်ထားတဲ့ နည်းဥပဒေ၊ စည်းကမ်းချက်တွေအပြင် အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို တစ်သွေမတိမ်းလိုက်နာပြီး အခွန်ကို တာဝန်ကျေပွန်စွာပေးဆောင်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု အကြောင်းအရင်းကတော့ ယခုလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းများနဲ့ စားသုံးသူများကို အစဉ်အမြဲဂရုစိုက်လျှက်ရှိပြီး ၎င်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုချီးမြှင့်သည့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ဆုတံဆိပ်ကြီးများ ကိုလည်း ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများသည် “Being A Good Corporate Citizen” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ တာဝန်သိတတ်ကျေပွန်သော နိုင်ငံံံ့သားကောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါတယ်။
Grand Royal Group International Co.,Ltd အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ထုတ်ပြန် ကြေငြာ လျှက်ရှိတဲ့ အခွန်ထမ်းကြီးများစာရင်းတွင် ထိပ်သီးအခွန်ထမ်း ၅ ဦးအတွင်း အစဉ်အမြဲသတ်မှတ် ဖော်ပြခြင်းခံရလျှက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပေးဆောင်နေတဲ့ အခွန်ငွေတွေဟာ နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ အဓိက ဘဏ္ဍာငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သိရှိနားလည် ထားပါတယ်။ အခွန်ဘဏ္ဍာငွေကောက်ခံမှုတွေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အနာဂတ်အခြေခံ အဆောက်အဦးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အဓိကကျပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာ မှာဖြစ်ပါတယ်။
Grand Royal Group အနေဖြင့် ယခု ၂၀၁၈/၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက်
(၁) အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံးပေးဆောင်သော အခွန်ထမ်းများစာရင်း ပုဂ္ဂလိက-
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွင် အဆင့် (၃)၊
(၂) ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်အများဆုံးပေးဆောင်သော အခွန်ထမ်းများစာရင်း ပုဂ္ဂလိက မြန်မာ ကုမ္ပဏီတွင် အဆင့် (၄) နှင့်
(၃) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးပေးဆောင်သော အခွန်ထမ်းများစာရင်း ပုဂ္ဂလိက- နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွင် အဆင့် (၅) အဖြစ် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရ ပါတယ်။
“နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်အပြည့်အဝပေးဆောင်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ လူမှုတာဝန် ကျေပွန်မှု တစ်ရပ်အဖြစ် အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော် တို့ ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင် အထူးကုန်စည်အများဆုံးထမ်းဆောင်တဲ့ အခွန်ထမ်းကြီး (၁၀) ဦး စာရင်းမှာ နိုင်ငံတကာ (Joint Venture) အဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်တွင်း ယမကာကုမ္ပဏီတွေ ပါဝင်နေတာကို အထူးသတိထားမိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ နည်းစနစ်တွေက ပိုမိုသင့်လျှော်ပြီး၊ ယုံကြည်အားထားဖို့ ကောင်းတဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်နှီးမြှပ်နှံမှုတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ အဓိကသော့ချက်တစ်ခုလို့ ယုံကြည်လက်ခံထားပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ Grand Royal Group သည် Thai Beverage Company နဲ့ အကျိုးတူပူပေါင်းထားသလို၊ Seagram Myanmar ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီး များကိုလည်း အလားတူရင်းနှီးမြှပ်နှံလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယခုလက်ရှိ အခွန်စည်းကြပ်တဲ့ နည်းစနစ်ကြောင့် မကြာခင် အချိန်တွင်းမှာ မြန်မာဈေးကွက်ထဲကို အသစ်အသစ်သော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံတွေ ဝင်ရောက်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး ယခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အအစည်း တွေကနေအသိအမှတ်ပြုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေ၊ ချီးမြှင့်မှုတွေကို ာရယူနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းထုတ် ယမကာ ကုန်ပစ္စည်းများသည် တင်သွင်းလာသော နိုင်ငံခြားဖြစ် ကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ တန်းတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာနေပြီဖြစ် ပါသည်။သို့ပါ၍ ကျွန်တော်တို့ GRG အနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူအားလုံးရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဟာ တရားဝင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် တွေရရှိကြပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခွန်ပမာဏကို တိတိကျကျ ပေးဆောင်ကာ တန်းတူရည်တူ ယှဉ်ပြိုင်မှု “ Level Playing Field” ကို မြင်စေချင်ပါတယ်” ဟု Grand Royal Group ၏ Co-Chairman ဖြစ်သူ ဦးအောင်မိုးကျော်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေမှာ Tiering System အမျိုးမျိုးရှိပြီး အဲဒီစနစ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ယမကာထုတ်ကုန်များနှင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေက ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားနေကြတဲ့ ယမကာထုတ်ကုန်တွေ အားလုံးအတွက် ခြုံငုံမိတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အထူးကုန်စည်ခွန် စည်းကြပ်တဲ့ Tiering စနစ်တွေ အားလုံးကို တစ်ခုတည်း ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ မှောင်ခိုဈေးကွက်က ပိုမိုကြီးထွားကျယ်ပြန့်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရင်နှီးမြှပ်နှံသူများနှင့် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အင်မတန် ထိခိုက်နစ်နာပြီး တရားမျှတမှုမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ယခုလက်ရှိ ပြဌာန်းကောက်ခံလျှက်ရှိသည့် အခွန်ဥပဒေမှ အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများသည်လည်း ပိုမိုဆုံးရှုံးလာနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး၊ ဒီအချက်ဟာဆိုရင် ဈေးကွက်အတွင်း အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိပါတယ်။ ဒီမှောင်ခိုဈေးကွက်ဟာ နို်င်ငံတော် အစိုးရအတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေ တစ်ခုတည်းဆုံးရှုံးနစ်နာတာ မဟုတ်ပဲ၊ တစ်ဖက်မှာ FDA ရဲ့ ထောက်ခံချက် မရရှိထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအတုအပများကို သတိမထားမိပဲ ဝယ်ယူသုံးစွဲမိတဲ့ စားသုံးသူတွေအတွက် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဖို့ ပိုမိုအလားအလာရှိ ပါတယ်။” ဟု Grand Royal Group ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Mr.Sanjay က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
GRG အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေသူတွေအတွက် လူနေမှုဘဝနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးအမြတ်တွေအတွက်လည်း လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ် (CSR) ကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “ Clean Water Project” သန့်စင်သောရေစက်တိုင်း၏ အဖိုးတန်မှုဆိုတဲ့ ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ထာဝရသောက်ရေသန့် ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်း ဟာဆိုရင် ယခုချိန်အထိ လူပေါင်း ၄၀,၀၀၀ ကျော်ခန့်နှင့် အိမ်ခြေပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်ခန့်ကို ရေသန့်ရရှိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ယခုလက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး သောက်သုံးရေသန့်နှင့် ရေရရှိရန် အင်မတန်ခက်ခဲ နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများကို ကူညီပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထပ်လောင်းပြောရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်း လုပ်ငန်းဟာလည်း မျက်စိဝေဒနာရှင်ပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်ခန့်၏ အမျိုးမျိုးသော ဝေဒနာတွေကို ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSR လုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (AMCHAM) မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာလုံးရဲ့ အကောင်းဆုံး CSR လုပ်ငန်းထူးချွန်ဆုဖြင့် အသိအမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်အပြင် ၎င်းဆုကို (၄) နှစ်တိတိ ချီးမြှင့်ခြင်းခံ ခဲ့ရပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့ပြင် ကျွန်တော်တို့၏ Grand Royal Whisky ကို နိုင်ငံတကာမှ ယမကာနှင့်ပတ်သက်သည့် Research အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော International Wine and Spirit Research မှ ထုတ်ပြန်သည့် ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးမားဆုံး ယမကာအမှတ်တံဆိပ်(၁၀၀) တွင် အဆင့် (၄၁) အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွက် ကမ္ဘာ့တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံး ယမကာထုတ်ကုန်အမျိုး (၁၀၀) တွင် အဆင့် (၃၈) အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားပြီး နိုင်ငံတကာမှ ယုံကြည်လေးစားရတဲ့ Grand Royal Whisky Brand သည် အချိန်တိုအတွင်း ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အောင်မြင်မှုရရှိပြီး ယခုကဲ့သို့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရခြင်းများသည် ကျွန်တော်တို့၏ အကြီးမားဆုံး သော အောင်မြင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Grand Royal Group အနေဖြင့် ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးအလုပ်ခွင်အဖြစ် အမေရိကန် အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော The Great Place to Work Institute မှ အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းခွင် “A Great Place Workplace” အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နိုင်ငံပေါင်း (၆၀) ကျော်ရှိ အဖွဲ့အစည်း (၁၀,၀၀၀) တွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းခွင် Gold Standard အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် မြန်မာအလုပ်သမားများ အတွက် မြင့်မားသောယုံကြည်မှု (High-Trust) နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောယဉ်ကျေးမှု (High Performance Culture) တို့ တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Employer Awards 2019 ဆုပေးချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနားတွင်လည်း
• Best use of internal marketing for company pride (Bronze)
• Best career advancement programme (Bronze)
• Best learning and development programme (Silver)နှင့်
• Most innovative use of technology in HR (Silver) စသည့် ဆု (၄) ဆုဖြစ် ထပ်မံ
အသိအမှတ်ပြု ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီး၊ World HRD Congress မှလည်း “Dream Employer of the year 2019” ဆုဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။
GRAND ROYAL GROUP INTERNATIONAL CO., LTD IS AMONG THE5BIGGEST TAX PAYERS IN MYANMAR English Version